जिता बरालले ट्र-मा सेन्टरमा गरेकाे यस्तो क्रियाकलापबारे आयो यस्तो खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जिता बरालले ट्र-मा सेन्टरमा गरेकाे यस्तो क्रियाकलापबारे आयो यस्तो खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्)
admin September 26, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाण्डौं, असोज १० । नेपालका लागि नेपाली संस्था को कोषाध्यक्ष जिता बरालले ट्र-मा सेन्टर मा गरेको कृयाक्लाप प्रति धार्मिक अभियन्ता तथा विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तराष्ट्रिय समितीका अध्यक्ष सागर थापाले टिप्पणी गरेका छन । शनिबार नियात्रा टिभी संगको अन्तर्वाताका क्रममा वहाँले टिप्पणी गर्नु भएको हो ।
एक प्रश्नको जवाफमा वहाँले भन्नु भयो “नेपालमा यती धेरै अभियानताका नाममा बि-कृति आई सक्यो कि अब राज्यले यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । अब त जे जसो गरे पनि अभियानता हुने लहड चलेको छ ।”
जिता बराल जस्तो बिम्मेवार महिलाले ट्रमा सेन्टरमा त्यस्तो अमानविय हर्कत गर्नु नर्स पेशाकै नाम बदनाम गर्नु सरह हो । कुनै नसा-लु पदार्थ खाएर यस्तो हरकत गर्नु गरेको भए त कडा सजाय हुनु पर्छ । कानुन बमोजिम कारवाही हुनु पर्छ । भन्नु भयो ।